I-Turnbull Cottage, ukucoca kukaHana - I-Airbnb
I-Turnbull Cottage, ukucoca kukaHana
Isetwe ngasemva kwetyholo lomthonyama, iTurnbull Cottage yindlu enamagumbi okulala amathathu abekwe eHannah's Clearing, umgama oyimizuzu eli-15 ukuya emazantsi kwilokishi yaseHaast kunye nemizuzu engama-20 yokuqhuba usuka eJackson's Bay. Ngokufikelela ngokulula kuyo yonke into entle yoNxweme lwaseNtshona, iilwandle ezimagingxigingxi, ukuhambahamba, ukuloba, i-white baiting, i-jet boating, ukuzingela, iinqwelo-moya zenqwelomoya okanye ukuphumla, i-Turnbull cottage ikhululekile, ifudumele kwaye ixhotyiswe kakuhle ukuhlala kwakho.
Kulwahlulo olutsha olunokufikelela ngasese elunxwemeni iTurnbull Cottage likhaya laseLockwood elineebhedi ezimbini zokumkanikazi kunye neebhedi ezimbini ezingatshatanga kumagumbi amathathu ahlukeneyo. Iibhedi zikhululekile ngelinen esemgangathweni. Ikhitshi ixhotyiswe kakuhle kubandakanya i-dishwasher, i-oveni, umatshini wekofu ye-capsule, umpheki ocothayo kunye ne-pantry enika izithako ezisisiseko kubandakanya iti kunye nekofu. Umlilo weyunca ubonelela nge-ambience eshushu kunye nedesika enkulu inika indawo eninzi yokuhlala ngaphandle.
Ulwandle luhambo lweemitha ezingama-80 kwaye luqhelekile kuNxweme oluseNtshona, lujikelezwe ngamatyholo omthonyama, agqunywe ngumthi okhukulisayo oneembono ezintle zeentaba kunye ne-surf yasendle!
Ukutya kufumaneka kwilokishi yase-Haast okanye kwi-Jackson's Bay Cray Pot (ngexesha lonyaka).
Indlu ibucala kwaye siya kukushiya wonwabele uxolo ngexesha lokuhlala kwakho.